သင့်ဖုန်းအား ခိုးယူသူ၏ ရုပ်ပုံကို ရိုက်ယူပေးမည့် Lookout လုံခြုံရေး Android app ~ YGNBlogger
သင့်ဖုန်းအား ခိုးယူသူ၏ ရုပ်ပုံကို ရိုက်ယူပေးမည့် Lookout လုံခြုံရေး Android app
07:02 Android Apps and Games, သတင်း No comments
လုံခြုံရေး software ဖန်တီးသူများက ဖုန်းသူခိုးများကို ဖမ်းပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်း တစ်ခုအား ၄င်းတို့၏ Lookout Android app တွင် ထည့်သွင်း ပေးလိုက်သည်။
၄င်းလုပ်ဆောင်ချက် အသစ်သည် သူစိမ်းတစ်ဦးက သင့်ဖုန်းအား unlock လုပ်ရန် ကြိုးစားမှု သုံးကြိမ် မအောင်မြင်လျှင် ဖုန်း၏ မျက်နှာပြင်ရိုက် ကင်မရာမှ အဆိုပါ သူစိမ်း၏ ပုံကို အလိုအလျှောက် ရိုက်ယူထားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သင့်ထံသို့ ထိုသူ၏ ပုံနှင့်တကွ သတိပေးထားသော အီးမေးတစ်စောင် ပို့ပေးမည် ဖြစ်သည်။
ထိုအခါ အသုံးပြုသူသည် Lookout.com အင်တာနက် စာမျက်နှာ၏ မိမိ အကောင့်သို့ log in ၀င်ရောက်ကာ ဖုန်းတည်နေရာနှင့် တည်နေရာ history ကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အကယ်၍ တစ်လလျှင် (၃) ဒေါ်လာခန့်နှင့် တစ်နှစ် ဒေါ်လာ (၃၀) ခန့် ကုန်ကျသော Lookout ၏ Premium service ကို ၀ယ်ယူ ထားသူများသည် အဝေးမှ မိမိဖုန်းရှိ အချက်အလက်များကို ဖျက်ပစ်ခြင်း remote wipe နှင့် အဝေးမှ လော့ခ်ချခြင်း remote lock စသည့် အပိုဆောင်း ၀န်ဆောင်မှုများကို ရနိုင်သည်။ နောက်ထပ် ဖြည့်စွက်လိုက်သော ၀န်ဆောင်မှု တစ်ခုတွင် အသုံးပြုသည် ခေါ်ဆိုရန် ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် လိပ်စာ စသည့် မိမိ၏ custom massage ကို ဖုန်း၏ lock screen တွင် ချန်ထားနိုင်သည်။
credit : mrtv4.com.mm
ဒီပိုစ့်ကိုနားမလည်လို့မေးမြန်းမလား? စမ်းကြည့်တာအဆင်မပြေလို့ မေးမြန်းမလား? ဒီပိုစ့်နဲကမဆက်စပ်တဲ့ တခြားနည်းပညာတွေကိုမေးမြန်းမလား? [Click Here] ကို သွားရန်မေးမြန်းပါ။
တရုတ်ဟန်းဆက် ဖြစ်ကြောင်း အလွယ်တကူ သိနည်း
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော် YGNBlogger ပါ။ ယနေ့ Technological Villa ရဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် article ကိုပြောပြပါ့မယ်။ အဲ့ဒါတရုတ်ဟန်းဆက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ တရ...
လွယ်ကူလေ့လာ ကလေးများအတွက် ပရိုဂရမ်းမင်းပညာ ပရိုဂရမ်းမင်း (Programming) လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာရပ်ကို လွယ်တယ်လို့တော့ မပြောချင် ပါဘူး။ ဒါပေမယ...
SmiSimi Chats, စက်ရုပ်လေးနဲ့အပျင်းပြေစကားပြောမယ် SimSimi က ကိုရီးယားကလုပ်တဲ့ ချက်တင်လေးပါ။ စက်ရုပ်လေးနဲ့ချက်ဖို့ပေါ့။ မြန်မာလိုကော၊ အင်္ဂ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှု စနစ်မှာ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးမှ MPT အမည်ဖြင့် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုများအား စတင်ရောင်းချခဲ့ခြ...
ကွန်ပျူတာအသုံးပြူခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေး
ကွန်ပျူတာအသုံးပြူခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေး ခေတ်မှီတိုးတက်နေတယ့်ခေတ်ကြီးမှာ လူကြီး လူငယ်မရွေး နေ့စဉ် ကွန်ပျူတာနယ့် ထိတွေ့ကိုင်တွယ် လုပ်ကိ...
iPhone5ဈေး ကျပ်တစ်သိန်းဝန်းကျင် ကျဆင်း
iPhone5ဟန်းဆက်ဈေးနှုန်းများမှာ ပြည်တွင်းမိုဘိုင်းဖုန်း ဈေးကွက်အတွင်းသို့ စတင်ဝင်ရောက်ပြီး နှစ်လနီးပါးအကြာတွင် ကျပ်တစ်သိန်း ၀န်းကျ...
သုဓမ္မာဇရပ်တန်းနှင့် အအေးဆိုင်များ နောက်ကွယ်တွင် သမီးရည်းစား အတွဲများ၏ မဖွယ်မရာစခန်းများအဖြစ် တည်ရှိနေ
မန္တလေးမြို့၏ အထင်ကရ နေရာများထဲတွင် သုဓမ္မာဇရပ်တန်းတွေသည်လည်း ပါဝင်ပေသည်။ သမိုင်းဝင် အမွေအနှစ်များ ဖြစ်သောကြောင့် နိုင်ငံတော်မှ ပြုပြင် ထိန...
ဆိုဒ်ပြောင်းရွေ့ခြင်း HTTP://TECHINBLOGGING.BLOGSPOT.COM သို့ပြောင်းလိုက်ပြီ
ဒီဆိုဒ်ကိုဆက်မရေးဖြစ်တော့ပါ။ လာလည်တာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ HTTP://TECHINBLOGGING.BLOGSPOT.COM ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီလို့ကြော်ငြာအပ်ပါတယ်။ ခုလ...
အိမ်တစ်လုံးတန်ဖိုးထက်ပို၍ ဈေးကြီးသော iPhone ဟန်းဆက်
Unique London ကုမ္ပဏီက ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး iPhone ဟန်းဆက်ကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ iPhone ဟန်းဆက်အား အီတလီနိုင်ငံ လုပ်သားရေ၊ ၁၈...
Burning Disc (1)
Co.cc Hacks (3)
Free Menubars (1)
Hack Password (1)
iPhone Apps and Games (1)
iPhone Tricks (1)
Mozilla Firefox Tricks (4)
Multiply Themes (1)
Ning Tricks (1)
Premium Link Generator (3)
Recovery Softwares (1)
Spam Attack (2)
Whois sites (3)
Windows Vista Themes (1)
Windows XP Activators (1)
Windows XP Themes (3)
Windows7က Menu ကို Windows 8 မှာသုံးမယ်
How to hack SEO for your blog?
Gmail Password အခိုးခံရခြင်းနှင့် Disable အကြောင်း...
စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားသည့် Archos 97 Titanium HD အ...
Apple 4S သုံးဆွဲသူများကို iOS 6.1 သို့မပြောင်းအောင...
Windows XP Genuine ကို Activate လုပ်မယ်
Mozilla ကုမ္ပဏီက ၂၀၁၂ အယုံအကြည်ရဆုံးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်...
TicTacToe3D ဂိမ်း [HTML Codes-2]
စကားထပ်ခါပြန်ပြောတဲ့စက် [HTML Codes-1]
သင့်ဖုန်းအား ခိုးယူသူ၏ ရုပ်ပုံကို ရိုက်ယူပေးမည့် L...
<div align="center"><br/><a href="http://pyae-phyo.blogspot.com/" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;" target="_blank"><img alt="http://pyae-phyo.blogspot.com" border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-s7F6dctwcoc/UJD2RzQKfiI/AAAAAAAABCc/RCRkNJZ6ZTk/s1600/logo+medium.png" title="http://pyae-phyo.blogspot.com" /></a><br/></div><br/>
Copyright © YGNBlogger | Powered by Blogger